Matanho ane Sarudzo dzeMari, Chikamu 1 | Ehupfumi Zvemari
Nguva pfupi yapfuura takataura pane iyo blog nezve iyo Sarudzo dzemari. Iwo mamwe mafomu ekudyara uye / kana fungidziro inowanikwa mukati memusika wemasheya. Ivo chishandiso icho inogona kuve yakaoma kunzwisisa uye yakaoma kunzwisisa, kunyanya kune varimi varikungotanga kushandisa iyi kirasi yeasset. Iyi posvo inoitirwa kuve yekuwedzera yekuwedzera kuti unzwisise marongero akasiyanasiyana anowanzoshandiswa pamwe nesarudzo dzemari. Neichi chikonzero, kana iwe usingazive mashandiro avo kana iwe uchine kusahadzika, unogona kufarira kuverenga pakutanga kuti chii musika wekusarudza. Uye ini ndinoikurudzira zvikuru… kune maviri marudzi awo, iwo Mafoni, maPuti uye anogona kuve ese ari maviri ekutenga nekutengesa. Kurongeka kusiri iko munzira yatisingade nekukanganisa, kunogona kutungamira mukurasikirwa kusingaperi.
Nekudaro, kana iwe wasvika pano, uye iwe uchifunga kuenderera uchitsvaga mumusika wekusarudza, ndiri kuenda kuzopa matatu matipi nesarudzo dzemari pazasi. Ndinovimba munogona kunakidzwa nezvimwe zvacho sezvandinoita. Zvino ndipo zvinhu pazvinonyanya kufadza, uye zvakaomarara panguva imwe chete, asi ndinovimba unokwanisa kuzvitora. Iyo mikana yaive, iripo uye ichave iri. Saka hapana kumhanyisa kudzidza. Ngatitangei!
1 Yakafukidzwa Kufona Sarudzo
1.1 Maitiro ekuuraya
1.2 Mhosva dzekuuraya isati yapera
2 Kuroora Kuisa Isu
3.1 Yakareba Straddle / Tenga
3.2 Ipfupi Straddle / Kutengesa
Yakafukidzwa Kufona Sarudzo
Iyo Yakafukidzwa Kufona zano, inonzi zvakare Yakafukidzwa Kufona muchiSpanish, ine iyo kutenga zvikamu uye kutengesa sarudzo yekufona pane zviito zvakafanana. Chinangwa chikuru chakateedzerwa mune ino zano nesarudzo ndiko kuunganidzwa kweprimiyamu.
Huwandu hwakaenzana hwezvikamu izvo zvikamu zvepasi zviripo mune sarudzo kana sarudzo idzo dzinoitirwa kutengeswa dzinofanira kutengwa. Semuenzaniso, kana iwe uchifunga kutengesa nzira mbiri dzekufona uye imwe neimwe iine zvikamu zana zviri pasi, chakanakira kungave kutenga mazana maviri emasheya eiyo kukosha. Chikonzero chikuru ndechekuti kana nguva yekupera yasvika, kana migove iri pamusoro pemutengo wesarudzo, zvinokwanisika kuti iitwe. Kana sarudzo yacho yaitwa, mutengi anozoda kubva kwatiri sevatengesi, migove pamutengo wakabvumiranwa. Ngatione maitiro ese zvirinani nemuenzaniso:
Tine mugove uri kutengesa pa € ​​20. Uye zvinoitika kuti isu tine mazana maviri emasheya ekambani iyi yatakatenga nguva pfupi yadarika (kana kare kare, chokwadi ndechekuti tinayo).
Takasarudza kutengesa 2 yekufona sarudzo paStrike mutengo we21 euros yeprimiyamu ye0 euros uye nekukura kwemwedzi mumwe.
Kana zvikamu zvikadzika. Kana zvikaitika kuderera kwemutengo wemugove, sarudzo hadziitwe nekuti hazvinganzwisisike. Zvirinani dai zvirizvo, isu taizotengesa zvinodhura! Zvakareruka, chingaitika pakupera ndechekuti sarudzo dzekufona dzakatengeswa dzaizopera uye taizovewo neprimiyamu yataizobhadhariswa. 0 x 60 = 200 maeuro akakunda.
Kana zvikamu zvikakwira. Ngatifungei kuti masheya anosvika makumi maviri nemashanu euros, uye isu tine sarudzo dzakazvipira pa25 euros. Iko kurasikirwa kwe21 x 4 = 200 euros. Nekudaro, nekuita kuti zvikamu zvitengwe, takawanawo mutsauko uyu, saka hatizofanirwe kuidzosera, kwete kana zvakananga. Saka kana zuva rekupera rasvika, sarudzo yaizoitwa. Mari dzekupedzisira dzinenge dzave makumi maviri kusvika makumi maviri nerimwe, 800 euros pachikamu chimwe nechimwe, pamwe neprimiyamu ye20 euros. Ndokunge, 21 x 1 = 0 euros.
Mhosva dzekuuraya isati yapera
Mukati meaya marongero ane sarudzo dzemari pane zviitiko umo sarudzo dzinogona kuitiswa nguva isati yapera. Izvi zvine chekuita nekuti vari veAmerica kana veEuropean Sarudzo. MaEuropean anogona chete kuurayiwa pazuva rekuperapanguva maAmerican chero zuva. Ndokunge, kana nekuda kwechikonzero chero chipi icho mutengi aizoona zvichibatsira kuzviita kare, kudivi redu sevatengesi tichava nechisungo chekutengesa masheya pamutengo wekuratidzira usati wapera. Muenzaniso unogona kunge uri wekuti paive nemugovera wekugovera panguva yekushanda. Mutengi weKudaidza aizoona kuti masheya achidzika nemutengo pasina kubatsirwa, saka kana mubhadharo wakabhadharwa uri mudiki, anogona kuzopedzisa kodzero yake.
Kuroora Kuisa Isu
Iyo zvakare inonzi Put Protectora muSpanish, iyi zano ine sarudzo inosanganisira yekutenga kwaPut kuve nenzvimbo yakatengwa muzvikamu. Nenzira iyi, kana isu tichitenda kuti iyo kukosha yatinayo ndeyekusimudzira, asi inogona kutambura yakaderedzwa kuderera uye tinoda kuzvidzivirira kubva pakuwa, zano iri rakakodzera. Nenzira iyi, tichava nekodzero yekuita sarudzo yePuti kuti tikwanise kutengesa zvikamu zvedu panguva yekupera nemutengo wakakwirira kuitira kuti kuderera kwacho kuitike.
Straddle zano ndeimwe yemaitiro pamwe nesarudzo dzemari pazvisingadiwe kuti mutenge zvikamu. Chikamu chakanaka cheiri zano ndechekuti tinogona kuchiita chero bedzi tichifunga kuti tine chikonzero chekutenda kuti kuchave nekuwanda kana kushomeka kushoma. Kune izvi, kune marudzi maviri eStraddle, iyo yakareba (kana yakatengwa) uye ipfupi (kana kutengeswa)
Yakareba Straddle / Tenga
Iyo Straddle mukutenga ine iyo kutenga panguva imwe chete, pamutengo mumwe chete wekuramwa basa, uye nezuva rimwe chete rekupera yesarudzo yekufona uye imwe Isa sarudzo. Misiyano inogona zvakare kusimuka, senge kuitenga kubva pamari uye nekudaro kudzikisira mutengo weprimiyamu.
Iri zano rinoshandiswa kana zvichitariswa kuti pachave nekushomeka kwakawanda uye mutengo unotora yakasimba kumusoro kana pasi nzira, asi izvo zvichange zvisingazivikanwe. Kana iri pasi, iyo Put sarudzo inokoshesa, nepo kana iri kumusoro, ichave iri yekufona sarudzo iyo ichawedzera mukukosha. Saka chiitiko chinotarisirwa ndechekuti mutengo unotora nzira yakasimba.
Mari yekushanda uku ndiyo yekutanga kune ese maviri marudzi esarudzo, saka mamiriro akaipisisa angave emutengo wemugove kuti urambe usingafadzi panguva yekupera. Tingadai takarasikirwa nemiprimiyamu pamwe nemukana mudiki wekuvadzikamisa.
Ipfupi Straddle / Kutengesa
Iyo Straddle yekutengesa haina kufanana neiyo yapfuura, iyo kutengeswa panguva imwe chete kweKufona uye sarudzo yePuti nezuva rimwechete rekupera uye mutengo wekuramwa. Pakati pemaitiro ane sarudzo dzemari, iyi ndeimwe yenjodzi dzakanyanya. Kazhinji, mubhadharo unotarisirwa kubhadhariswa nepo kushomeka kushoma kwemutengo wechinhu chinotarisirwa kuri kutarisirwa. Nekudaro, iyo yakaipisisa kesi mamiriro angave akasimba kwazvo mutengo kufamba mune imwe nzira. Izvi zvaizoshandura kuita kurasikirwa kukuru kwazvo kana izvi zvikaitika. Ini pachangu, handisati ndamboshandisa zano iri, nekuda kwenjodzi inosanganisira. Kune izvo zvandinofumura izvi nzira yepamusoro yezvinangwa zvekudzidzisa kupfuura sekurudziro.
Kana iwe uchifarira kuenderera nekudzika nemazano matsva ane sarudzo dzemari uye mamwe akaomarara, haugone kupotsa chikamu chechipiri!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Maitiro ane Sarudzo Yemari, Chikamu 1